सास फेर्ने ढुंगा - फ्रन्टलाईन नेपाल
एजेन्सी । विश्वमा केही यस्ता आश्चर्य चकित पार्ने वस्तुहरु रहेका छन् जसबारे अझै अध्ययन र अनुसन्धान हुनै बाँकी रहेको छ ।
तपाईले ढुंगालाई त देख्नु भएको छ ? तर, ढुंगा फोर्दा कहिल्यै रगत वा चोक्टा जस्तो आएको देख्नु भएको छ । यसो भनिरहँदा यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने सोच तपाईमा आउन सक्छ ?
चिली तथा पेरुको समुद्री किनाराहरुमा यस्तै ढुंगा पाइने मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्ता पत्थरलाई फुटाउँदा यसभित्रबाट रगत निस्किने तथा यो पत्थरभित्र मासु रहेको बताइन्छ ।
बाहिर निकै कडा देखिने यो पत्थर भित्र निकै नरम देखिन्छ । समुद्रको गहिराइमा यस्ता खाल ढुंगाहरु हुने मानिसहरुको भनाई छ ।
यो पत्थरभित्रको मासु निकै महँगोमा बिक्री हुन्छ दुनियाँका विभिन्न देशमा यसको माग पनि रहेको छ । यो ढुंगाको मासु काँचै खान मन पराइन्छ । अब अचम्ममा पर्नु भयो होला ? यो निर्जिव ढुंगा नभइ एउटा सामुद्रिक जिव हो । यो ढुंगा जस्तै देखिन्छ ।
जसले श्वास पनि फेर्दछ र खाना पनि खान्छ । यसले बच्चा पनि जन्माउने गर्छ । तर यो देख्दा हुबहु ढुंगाजस्तै देखिन्छ । त्यसैले यो रगत आउने पत्थरको नामले चिनिन्छ ।
Featured मनोरन्जन विश्व समाचार
१५ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०८:३८ February 27, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं , फागुन १५। काठमाडौँ –भिडियो गेम भन्दा तपार्ईलाई विभिन्न भिडियो गेमको याद आउँछ होला । विश्वमा सर्वप्रथम सन् १९५८ अक्टोबरमा भिडियो गेमको सुरुवात भएको थियो, जसको नाम थियो PONG । अहिलेको यो आधुनिक युगमा हामीलाई प्रविधिले धेरै कुरा सहज र सरल बनाइदिएको छ । अहिलेका धेरै मानिसमाझ एउटा लोकप्रिय शब्द सुनिन्छ, जुन शब्द हो– […]
फेसबुक बन्यो दशककै सर्वाधिक लोकप्रिय एप
२ पुष २०७६, बुधबार १६:०० December 18, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
गुगल प्ले स्टोर तथा एप्पलको एपस्टोरमा लाखौँ एपहरु उपलब्ध छन् । विश्वका करोडौँ मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्ने यी एपहरु मध्ये पछिल्लो दश वर्षमा सबैभन्दा धेरै डाउनलोड भएको एप कुन होला ? यो जिज्ञासा उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । पछिल्लो एक रिपोर्टले यस सम्बन्धी जिज्ञासा शान्त पारिदिएको छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक दशकमा […]
६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १८:१८ May 20, 2019 फ्रन्टलाईन नेपाल
काठमाडौं, जेठ ६ । भारतकी चर्चित बलिउड गायिका नेहा कर्करले काठमाडौंमा लाइभ प्रस्ुतत िगर्ने भएकी छिन् । पारामाउन्ट इन्टरटेन्मेन्टको आयोजनामा काठमाडौंको लर्ड अफ दि डिङ्क्स (एलओडी)मा जेठ २५ गते हुने विशेष शोमा उनले प्रस्तुती दिने भएकी हुन् । नेहा कर्करसँग उनका ब्याण्ड मेम्बर र यस सिजनका इन्डियन आइडलका टप टेन प्रतिस्पर्धीसमेत नेपाल आउन लागेको आयोजकले […]
अब युरोपियन कन्फेरेन्स लिग…